Odayaasha Hiiraan oo muddo 5 maalmood ah loo qabtay iyo arrin looga digay inay.. – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Odayaasha Hiiraan oo muddo 5 maalmood ah loo qabtay iyo arrin looga digay inay..
Waxaa maanta magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan kulan ku dhexmaray wafdi ka socday IGAD iyo qaar ka mid ah odayaasha gobolkaasi, iyadoona kulanka kadib wafdiga IGAD ay odayaashaa gobolka u qabteen muddo shan maalmood ah.
Waxaa wafdiga IGAD hogaaminayay wakiilka ururkaasi u qaabilsan Soomaaliya Danjire Maxamed Cabdi Afeey, waxaana sidoo kale wafdiga ka mid ahaa Jen. Gabre iyo xubno ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya.
Sidoo kale, dhinaca odayaasha gobolka Hiiraan waxaa hogaaminayay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo si weyn mucaarad ugu ahaa maamul u sameynta Hiiran iyo Sh/dhexe.
Xubnihii ka socday ururka IGAD ayaa odayaasha gobolka Hiiraan hor-dhigtay inay ka qeyb-galaan shirka magaalada Jowhar, si loo dardar geliyo dhismaha maamulka gobolada Hiiran iyo Sh/dhexe.
Kulanka ayaa markii dambe la isku mari waayay, iyadoo la sheegay in odayaasha ay yimaadeen shuruudo fara badan oo ah kuwii hore u socon waayay, waxaana markaas kadib ay IGAD si cad ugu sheegtay in labada gobol aanay ka hareynin nidaamka federaalka Soomaaliya, sidaas darteedna ay marka hore odayaasha aqbalaan dhismaha maamulka kadibna wixii faahfaahin ah dib looga hadlo.
Wafdiga IGAD ayaa sidoo kale odayaasha u sheegtay inaysan aqbaleynin dib u dhac kale oo ku yimaada shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, balse kaliya arrinta u furan odayaasha Hiiraan ay tahay in si deg deg ah loo bilaabo shirkii Jowhar.
Arrintan oo ku adkaatay odayaasha ayaa codsaday in la siiyo muddo 5 maalmood ah oo ay dib ugula noqdaan arrinta dadkooda, iyadoona wafdiga IGAD ay ka aqbaleen codsiga ay soo jeediyeen odayaasha.
Ugu dambeyntii, IGAD ayaa u sheegtay odayaasha Hiiraan in go’aankooda oo cad u gudbiyaan si qoraal ah muddada loo qabtay ee 5ta maalmood ah, iyadoona dhinaca kale aanay jiri doonin wafdi kale ururka IGAD ay usoo diri doonto magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.